Monthly Bonus For August 2020 ? Double Crown ? New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 48,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Moon Enzali Kyi Myint ( FB-000045 ) နှင့် New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 35,000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Khine Myat Oo (FB-000052) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ? Congratulation ? ပါ Double Crown Agent တို့ August လအတွင်း New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 48,000 ကျော်နှင့် အထုပ် 35,000 ကျော် ရောင်းချပေးပြီး ဖြစ်တဲ့အတွက် Double Crown အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 48,000 ကျော်ရောင်းချပေးတဲ့ Agent အတွက် ?ငွေသား (115) သိန်းကျပ်တိတိ နှင့် New Skiin All In One Tone Up Cream (2,400) ထုပ် New Skiin All In One Tone Up Cream အထုပ် 35,000 ကျော်ရောင်းချပေးတဲ့ Agent အတွက် ?ငွေသား (87) သိန်းကျပ်တိတိ နှင့် New Skiin All In One Tone Up Cream (1,750) ထုပ် နောက်ထပ် ဘယ်လို ❤️Super Agent ❤️တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 6000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Yu May Aung (FB000048) Moon Enzali Kyi Myint (FB000045) တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Double Crown Agent တို့ !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 6000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Double Crown Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (40) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။
Ketchup Matte Liquid Lipstick 7000 ကျော် ရောင်းချခဲ့တဲ့ Agent ကတော့ Htet Htet Aung (FB000011) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ???Congratulation ပါ Htet Htet Aung !!! June လအတွင်း Ketchup Matte Liquid Lipstick 7000 ကျော်ရောင်းချပေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် ? Double Crown Agent ? အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အောက်ပါ Bonus များကို ချီးမြှင့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ?Bonus ????ငွေသား (52) သိန်းကျပ်တိတိ နောက်ထပ် ဘယ်လို ?Super Agent? တွေ ထွက်ပေါ်လာဦးမယ်ဆိုတာကို စောင့်မျှော်အားပေးရအောင်နော်။